လင်းဝင်း (နည်းပညာ): ဖုန်းကင်မရာဖြင့် ဓာတ်ပုံကောင်းအောင်ရိုက်ကူးနည်း
iPhone အသုံးပြုနည်း ( မြန်မာဘာသာပြန်စာအုပ်)
မင်္ဂလာပါ ဟိုတစ်လောက Facebook မှညီငယ်တစ်ယောက်တောင်းဆိုလာတဲ့ စာအုပ်လေးပါအဲဒီတုန်းကကျနော်အလုပ်နည်းနည်းများနေတာနဲ့မတင်ပေးဖြစ်ခဲ့ပ...
Root လုပ်စရာမလိုဘဲ မြန်မာ font သုံးလို၇တဲ huawei JB Themes Font
Huawei Y300C - G510 - C8813 - C8813D JB V4.1.1 device တွေကို Root လုပ်စရာမလို ... dload file မလ...
ဂီတစာအုပ်များ ခုတစ်လော ဂီတာ တွေလေ့လာဖြစ်နေလို့ ဝါသနာတူတွေလည်း လေ့လာနိုင်အောင် စာအုပ်လင်ခ့်တွေကို ကိုအာကာကြီး ကနေ ပြန်ရှဲပေးတာပါ ။ ...
ဖုန်း လေးနဲ့ လွယ်ကူစွာ နှစ် လုံးထီ 2D ကြည့်လို့ ရမယ့် APK လေးပါ
ဖုန်း လေးနဲ့ လွယ်ကူစွာ နှစ် လုံးထီ 2D ကြည့်မယ် Credit to အောင်လေး (နည်းပညာ) ဆော့ဝဲကို တော့ သေချာ အဆင်ပြေ အောင်လုပ်ေ...
PDFစာအုပ် ၁၅၀အုပ် ကျွန်တော် စာအုပ်တွေလိုက်ရှာရင်းနဲ့ တွေ့လာလို့ ပြန်ရှဲပေးတာပါ ။ တော်ောတ်စုံပါတယ် ။ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ ။ တော်ကြာ လင်ခ့်...
အဲယားကွန်း gas ဖြည့်နည်း
အဲ ယား ကွန်း ကို Gas ဖြည့်‌ မယ်‌။ ဘယ်‌ က ‌နေ ဖြည့်‌ မှာ လဲ ? Suction (or) Discharge ? Suction ဆို တာ က စုပ်‌ ယူ တာ လို့ လူ တိုင်း သိ...
Y325 T00 FIRMWARE တင်နည်း& dload...
Huawei ရဲ့ အခု နောက် ပိုင်းထွက်..လာတဲ့..Y Series Model Y325-T00 ဖြစ်ပါတယ်..မြန်မာစာထည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်..အကြောင်းတစ်ခုခု ကြောင့်..logo ကနေ ...
မရှိသေးတဲ့လူများ မသိသေးတဲ့လူများအတွက်ရည်ရွယ်ပါ တယ် ကိုတာ _ တွေးသူများ < http://www.mediafire.com/? 1jjyyym5tg4 > ကိုတာ + _ လူ...
နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်း အမြန်ထိုးကြမယ် နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်းတွေကို မြန်မာစာတန်းထိုး လုပ်ဖို့အတွက် နည်းလမ်...
Free download မြန်မာစာအုပ်များ
မြန်မာစာအုပ်တွေ လိုချင်တဲ့သူများအတွက် သူငယ်ချင်းများ အားလုံးမင်္ဂလာပါ... ကျွန်တော် တစ်နေ့က Free download ဆွဲလို့ရတဲ့ ဆိုဒ်(၁၈)ခု...
ဖုန်း ကင်မရာကို အသုံးပြုလို့ လူတိုင်း ပုံကောင်းကောင်း ရိုက်တတ် ချင်ကြမယ် လို့ ယုံကြည် ပါတယ်။ ဒီတော့ ပုံကောင်းကောင်း ထွက်စေမယ့် နည်းလမ်းများ ကို မျှဝေပေး လိုက်ရ ပါတယ်။
နည်းလမ်းလေးတွေ စပြောကြရ အောင်..
(၁) Zoom ဆွဲမရိုက်ပါနဲ့..
အရေးအကြီးဆုံး အချက်ဖြစ် ပါတယ်။ ဖုန်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ အခါ Zoom ဆွဲပြီး ရိုက်မယ့် အစား ပုံမှန် အတိုင်း ရိုက်လို့ ကိုယ် လိုချင်တဲ့ နေရာကို Crop လုပ်ယူလို့ ရပါတယ်။ Zoom ဆွဲလိုက်ခြင်းက ပုံရဲ့ အရည်အသွေးကို ကျဆင်း သွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ စမ်းကြည့်ပါ။ Zoom ဆွဲပြီးရိုက်တာနဲ့ ခပ်ရိုးရိုးရိုက်ပြီးကိုယ်လိုချင်တဲ့အပိုင်းကို Crop လုပ်ဆွဲကြည့်ယူတာနဲ့ ဘယ်ဟာပိုကောင်းသလဲဆိုတာသိမြင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ကိုယ်ရိုက်ချင်တဲ့ အရာနဲ့ ဝေးနေတယ်ဆိုရင် Zoom ဆွဲမယ့်အစားနီးနိုင်သမျှ နီးအောင်သွားရ ပါမယ်။
(၂) Original Mode ကိုသာသုံးပါ။
ကင်မရာတွေမှာ Mode အသီးသီးရှိပါတယ်။ Evening mode လား၊ Morning mode လား၊ night mode လားအစရှိသဖြင့် ရှိပါတယ်။
mode တွေ ဘယ်လောက်ပဲရှိရှိ Original နဲ့ ရိုက်ပြီးတော့ ပုံကို Edit လုပ်တဲ့အခါမှ mode ပြန်ပြင်နိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ Evening mode နဲ့ ရိုက်ထားဖြစ်ရင် အချို့ ဖုန်းဆိုရင် ပြန် edit လုပ်တဲ့အခါ Orignal mode ကို ပြန်ဆင်းလို့ မရတော့ ပါဘူး။
အဲ့ကျရင် edit ရ ပိုလို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ Camera 360 နဲ့ အခြား သော ပြင်စရာ app များစွာရှိပေမယ့် သူတို့က ပြင်စရာ App ပါ။ ရိုက်စရာ App မဟုတ်ပါဘူး။ Instagramတောင်မှ ပုံရိုက်ပြီးမှ သူ့ထဲပြန်ထည့် ပြင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။
ကင်မရာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း၊ Image Stable ဖြစ်အောင် ထိန်းတဲ့ နည်းပညာတွေ ဘယ်လောက် တိုးတက်ပါစေပုံကောင်းကောင်းထွက်ချင်ရင် လက်ငြိမ်အောင် ထိန်းသင့်ပါတယ်။
အကယ်၍ လက်တင်စရာရှိရင် တင် ထားပြီးတင်စရာမရှိရင် ဖုန်းကသေးတယ်ဆိုရင် လက်တစ်ဖက်ရဲ့ လက်ခုံး ပေါက် တံတောက်ဆစ်တင်တဲ့ အနေ အထားနဲ့ ရိုက်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်၍ ဖုန်းကအဲ့လောက် မသေးဘူးလက်နှစ်ဖက်လိုတယ်ဆိုရင်လည်း နှစ်ဖက်စလုံး ပေါင်းလို့ ခပ်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်အောင် ကိုင်နိုင်ပါတယ်။
(၄) အသံတိုးအသံချဲ့ buttonကိုသုံးလို့ ရိုက်ပါ
ဖုန်းတွေမှာအသံတိုးအသံချဲ့ buttonကိုသုံးလို့ ရိုက်လို့ရတယ် ဆိုတာကို ရောသိကြပါသလား..တကယ့် ကင်မရာကိုင်တဲ့ အရသာကိုရရှိစေဖို့ ဖုန်း ကုမ္ဗဏီများကဖန်တီးပေးထားပါတယ်။
အရင် ဖုန်းအဟောင်းများတော့ မသိ iPhone, Samsung, နဲ့ အခြားသောဖုန်း brand အများစုရဲ့ ၂၀၁၂ လောက် ကနေစထုတ်တဲ့ ဖုန်းများကသုံးလို့ရပါ တယ်။
Screen ပေါ်က button ကိုသုံးဖို့ ကြိုးစားနေရင် တစ်ခါတလေလက်မငြိမ်ပါဘူး။ ဒီမှာ exception တစ်ခု ရှိပါတယ်။ buttonကိုသုံးတယ် ဆိုတာ landscape ရိုက်မှပါ။ Potrait (ဒေါင်လိုက်) ရိုက်ရင်တော့ screen ထဲက နှိပ်စရာကပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
(၅) ရိုက်ကွက် အနေအထားကိုသိပါ
Landspace ပုံစံလိုချင်လား၊ Potraitပုံစံလိုချင်လားကိုယ်တိုင် စဉ်းစားပါ။ Landspace က ကင်မရာကလှဲ လိုက်တဲ့ အနေအထားဖြစ်ပြီးPotrait က ဖုန်းကိုအထောင်လိုက် အနေအထား ဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍ ရှုခင်းပုံရိုက် တယ်ဆိုရင် Landspace က အကောင်းဆုံး ဖြစ်ပြီးလူတစ်ဦးသို့မဟုတ် Object တစ်ခုခုကိုဦးတည်တယ်ဆိုရင် ထောင် လိုက်ကကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် နောက်ခံ ရှုခင်းနဲ့ လူကိုပါ ပါစေချင်တယ်ဆိုရင် Landspaceပုံရိုက် နိုင်ပါတယ်။
(၆) Focus ငြိမ်အောင် စောင့်ပါ
ယခုနောက်ပိုင်းဖုန်းတွေမှာဆိုရင် Auto Focus တွေ ပါပါတယ်။ Auto Focus ကိုမိမိက Focus ထားချင်တဲ့ အရာအပေါ် ရောက်အောင် လက်နဲ့တို့ထိပြီး တော့ ဆွဲယူပါ။
ပြီးရင် Focus ငြိမ်အောင် ခဏစောင့်ပါ။ Focus မငြိမ် သေးဘဲ ရိုက်မိရင် ပုံကမကောင်းတော့ပါဘူး။
(၇) HDR mode ဖွင့်ထားပါ
HDR mode ဖွင့်ထားရင် ဖုန်းတွေမှာပုံ နှစ်ပုံရိုက်ပေးတာမျိုးတို့ အချို့ဖုန်း မှာလုပ်ပေးပါတယ်။ တစ်ပုံကိုပုံမှန် ပုံရိုက်ပေးပြီးနောက်တစ်ပုံကို HDR mode နဲ့ ရိုက်ပါတယ်။
HDR Mode ကိုကိုယ်ရိုက်မယ့် ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက်မှာ လူများများပါတယ်၊ Object အများကြီး ပါတယ်ဆိုရင် ဖွင့်ထား သင့်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အားလုံးရဲ့ ရုပ်ထွက်ကို ကောင်း အောင် လုပ်ပေးပါတယ်။
Hight Definition Resolution ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုက်ကွင်းတစ်ကွက်ထဲမှာတစ်ပုံပဲမရိုက်ပါနဲ့။ အထူးသဖြင့် လူပုံတွေကို ရိုက်တဲ့အခါ ဖြစ်ပါတယ်။ မျက်လုံး မှိတ်သွားတဲ့အခါ ရှိမယ်။ အမူအရာ ပျက်တဲ့အခါ ရှိမယ်။
ဒါကြောင့်မို့ ရိုက်တဲ့အခါ ပုံတွေ အများကြီး ဆက်တိုက်ရိုက် သင့်ပါတယ်။ ၅ပုံ၊ ၆ ပေါက်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်ကအကောင်းဆုံးလို့ ထင်တဲ့ ပုံကိုရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
ပုံရိုက်တဲ့အခါ လူသို့မဟုတ် Object တစ်ခုခုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်ချင်ရင် အလင်းရောင်လာရာဘက်ကို မျက်နှာမူပြီးတော့ မရိုက်သင့်ပါဘူး။
ဥပမာ ကိုယ်ရိုက်တဲ့လူကနေရောင်လာတဲ့ဘက်မှာရှိနေတယ် ဆိုရင် ပုံရိုက်တဲ့အခါ လူဟာမည်းနေပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုအခြေအနေကျရင် လူကိုနေရောင်ဘက်ကို မျက်နှာမူစေပြီး ကိုယ်ကနေရောင်ကို နောက်ကျောယူလို့ ရိုက်သင့်ပါတယ်။
ဒါကနေရောင်ကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်အလင်းရောင်တွေတွက် မဆို ဖြစ်ပါတယ်။ အလင်းရောင်ကိုမဆန့်ကျင်ရပါဘူး။ အလင်းရောင်ကို အသုံးချ ရန်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ထန်းပင် ကြားထဲကနေနေရောင်ခြည်ထွက် လာတဲ့ ပုံရိုက် ရိုက်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့ တစ်မျိုးပေ့ါ။ ညဘက်မှာ ရိုက်ရင် လည်း အလင်းရောင်လာရာကိုပိုလို့တောင် မဆန့်ကျင်သင့်ပါဘူး။
(၁၀) Flash ကိုသတိထားပါ
ဖုန်းတွေရဲ့ Flash တွေ တိုးတက်လာတယ်ပဲပြောပြောကျနော်ကတော့ ယနေ့အချိန်ထိ Flash ဖွင့်ရိုက်ရင် လူ့မျက်လုံးကမြေခွေးမျက်လုံးလို အလင်းရောင် ထွက်သွားတာမျိုး၊ မူလ Object ရဲ့ အရောင်ကိုကွဲပြား သွားစေတာမျိုး တို့ ဖြစ်သွားပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ သူငယ်ချင်းရှိရင် ကိုယ်ရိုက်တဲ့အချိန် သူ့ဖုန်းကို Flash လေး ဖွင့်ထားပေးပါ လားလို့ အကူအညီတောင်းသင့် ပါတယ်။ အ
ကယ်၍ ကိုယ့်မှာဖုန်းနှစ်လုံးရှိရင် သူများအကူအညီမလို တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် လက်မငြိမ်ဘူးဆိုရင်တော့ အခြားလူကိုအကူအညီတောင်းနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ကာ အကူသုံး မယ့် မီးကအဖြူရောင်ပဲ ဖြစ်ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။ အနီရောင်၊ အစိမ်းရောင် အစ ရှိသဖြင့် မီးများကိုမသုံးပါနဲ့။
(၁၁) Resolution အမြင့်နိုင်ဆုံး မြင့်အောင် ယူပါ
ဖုန်းတွေမှာပုံကို 960×580, 2860×1500 အစရှိသဖြင့် ရွေးခွင့်တွေလည်း ပေးထားပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကို ရွေးခွင့်ပေးထားသည့်တိုင် ကိုယ်ကတော့ Resolution အမြင့်ဆုံးကိုပဲရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်လို သလောက် ပြန်ဖြတ်ယူနိုင်မှာမို့ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၂) ရိုက်ကွင်းရိုက်ကွက် ထောင့်ချိုး၊ အမြင့် အနိမ့် သိပါစေ
သာမန်အားဖြင့် လူပုံကိုချိန်မယ်ဆိုရင် ဖုန်း screen ထဲမှာပေါ်လာပါမယ်။ အဲဒီမှာ ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ ကင်မရာကိုကင်မရာလို့ မမြင်တော့ဘဲဒါကို မဂ္ဂဇင်းသို့မဟုတ် ကိုယ်မြင်ချင်တဲ့ စာမျက်နှာတစ်ခုခုပေါ်မှာ မြင်မယ့်အရာ တစ်ခုအဖြစ် မြင်ကြည့်လိုက်ပါ။
စောင်းနေလား၊ တည့်နေလားပေါ့။ စောင်းတာကိုလိုချင်လို့ idea ဆန်းပြီးစောင်းအောင် ရိုက်သူများလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုယ်ရိုက်မယ့် သူကအရပ်ပုရင် အပေါ်စီးကနေမရိုက်ပါ နဲ့။ အောက်ကနေ ပင့်ရိုက်သင့်ပါတယ်။
ဖုန်းကိုကိုင်တဲ့အခါ ကိုယ်ရိုက်မယ့် Object ကိုအောက်ကနေလား၊ အလယ်ကနေလား၊ အပေါ်ကနေလား ကိုယ်တိုင်ချင့်ချိန်ယူနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ကိုကိုယ်မြင့်ချင်တဲ့ မဂ္ဂဇင်းပေါ်ကအရာတစ်ခုအဖြစ် ခံစားပြီးတော့ ရိုက်ကူးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၁၃) Software တစ်ခုခုနဲ့ ပြန် Edit လုပ်ပါ
Software လို့ခေါ်တဲ့အခါ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲရှိတယ်။ ကွန်ပျူတာဆော့ဖ်ဝဲ ရှိပါတယ်။ ဖုန်းဆော့ဖ်ဝဲဆိုရင် Instagram, Snapseed, Camear 360 အပြင် အခြားသော Software များစွာလည်းရှိပါတယ်။
ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း Adobe Photoshop တို့လိုမျိုးတွေ ရှိပြီး Online ဆိုရင် picmonkey.com တို့လို အပြင် အခြားများစွာရှိပါတယ်။ Flicker iOSဆိုတာကိုလည်းအနောက်တိုင်းမှာအသုံးများပါတယ်။
ပြီးရင် ကိုယ်လိုချင် တဲ့အပိုင်းကို Crop လုပ်၊ အရောင်ပေါင်းတို့ကိုလုပ်လိုက်ရင် Perfect ဖြစ်တဲ့ ပုံများထွက်ပါပြီ။
ကိုယ်သိထားရမှာကဖုန်းကင်မရာဟာပရော်ဖက်ရှင် ကင်မရာမဟုတ်တာ ကြောင့် သိပ်မျှော်လင့်ချက် အကြီး ကြီးမထားစေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာလို့လဲ ဆိုလူတစ်ယောက်ရဲ့ မျက်နှာပုံကိုရိုက်ရင် DSLR က Zoom တွဲကြည့်တဲ့အခါ ပုံထွက်အိုကေပြီးအဆီပေါက်တွေမှာ မြင်နိုင်ပေမယ့် ဖုန်းကတော့ ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့လုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်ကို သိထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်နိုင်ချက်၊ သူ့မှာ ပါဝင်နေတဲ့ Function တွေကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
ယခုဖော်ပြချက် ကတော့ ကင်မရာ ဖြင့် ဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်ရန် စတင်ကြိုးစားနေသူများအတွက် Beginner guide သာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by wunnahtun at 11:28 PM
အသစ်တင်တိုင်းရချင်ရင်သင်၏ E-mail လိပ်စာပေးခဲ့ပါ:
comments မှာမေးထားတာလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ Email လိပ်စာဆက်သွယ်ရန်မချန်ခဲ့လျှင့် comments ပေးတဲ့နေရာမှာဘဲပြန်ဖြေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လင်းဝင်း( နည်းပညာ)ဆိုဒ်ကိုမိတ်ဆွေတွေကိုအသိပေးမျှဝေပေးကြရန်နှင့် facebook like လုပ်ပေးဖို့နဲ့ Member အဖွဲ့ဝင်ပေးကြပါရန် အသိပေးအပ်ပါတယ် Member ၀င်ထားချင်းအားဖြင့်အသစ်တင်တိုင်း မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Email ထဲသို့ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်
Ghost Push Killer 1.7
ရှင်းလို့မရဘူးရှုပ်ကုန်ပြီ.......... မြင့်မြတ် စိုး...
( သက်တံသစ် ) အစ/ဆုံး
အဆုံးမဲ့ အချစ်.... နေတိုး ဝေဋုကျော် ၀တ်မှုံရွှေရည်
Original Ganstar အော်ရီဂျင်နယ်ဂိုင်းစတား မြင့်မြတ...
အမှတ်တရ၏ တဖက်ကောင်းကင် ..... နေတိုး- ချစ်သုဝေ
ချစ်သူလိမ်းဖို့ day cream ......လူမင်း-သက်မွန်မြင...
ချိန်း - Nay Toe & Kyaw Kyaw Bo
ရက်စ်ဘော့စ် Nay Toe ,Thu Htoo San,Kyaw Kyaw
( မြင်းမိုရ်တို့၏ဂုဏ်သိက္ခာ ) ညီထွဋ်ခေါင် ခိုင်သင်း...
( Q.C GAME ) ကြူစီဂိမ်း Ye Yint Aung, Ei Chaw Po ,...
ဗရုတ်သုတ်ခ .......ဇေရဲထက် - ရွှေမူံရတီ
Software Collections (12.8.2016 )
Pyae Ti Oo & Ei Chaw Po သ တိ ထား စ/ဆုံး
ဘောလုံးဂိမ်းကောင်းလေး Dream League 2016 Football G...
AFTool 4.3.7 Full Version
Xiaomi (MI) ဖုန်းတွေအတွက် Xiaomi Model Finder v1.0...
Pokémon GO ကို ဘယ်လိုဆော့ရမလဲ ကစားနည်းလမ်းညွှန်
Samsung GalaxSim Unlock apk v2.6
Xiaomi MIUI 8 အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
တန်ပြန်ဝဋ် Myint Myat Wine- Su Khine Thein
တစ်ကောင်ကျွေး နှစ်ကောင်စား Myanmar Movie
USB Debugging On မထားပဲ Lock ပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့ And...
ရတနာမိုင် ရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် တေးစီးရီး ပ ဖ ဘ ဗ မ
Bunny Phyoe - လူပျိုလှည့်တေး 2013 [Album]
ဟန်ထွန်း - Collection
အောင်လ mp3 music
ချစ်သူများအတွက် အချစ်ဗေဒင် v.1.0 APK
mp3 songs download သီချင်းများဒေါင်းရန် 550songs
လိပ်ပြာပုံပြင် - နေတိုး၊ ဖွေးဖွေး
ရိပ်သိမ်းဂွင် စ/ဆုံး ... Myint Myat , Moe Hay Ko
အူကြောင်ကြောင်ကြွက်နဲ့ပူစီကက် - ခန့်စည်သူ,သက်မွန်ြ...
Computer,latop,printer,copier Driver for all
ကာရာအိုကေ ဆိုလို့ရတဲ့ software
Cyberlink PowerDirector 13.0 Multilang Retail Acti...
ဗီဒီယို တည်းဖြတ် ဆော့ဝဲ Adobe Premiere Pro CS5.5 v...
driver အခွေ မရှိတဲ့သူတွေအတွက်
အင်တာနက်လိုင်းအားမြင့်စေမယ့် (FOR ROOTED ANDROIDS)...
ရွှေရိုး dictionary for pc
Windows7Manager 5.0.4 + Crack down load
Sim card lock ကျရသောအကြောင်းများ
CPU အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
Myanmar Hot Sites.apk ရှယ်
ပိဋကတ် (၃ပုံ)ပါဠိ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ ကို ဖုန်းထဲကနေ မွှေနှေ...
သစ်ထူးလွင် The Voice Weekly 7Day News ဂျာနယ် Eleven ဂျာနယ် စီးပွားရေးသတင်းဂျာနယ် မြန်မာ့အလင်း ကြေးမုံ ရတနာပုံ မြ၀တီ အင်တာနက် ပေါ်ပြူလာ မြန်မာတိုင်းမ် ဈေးကွက် HR Management JournalှSoccer Myanmar The Messenger Ayawaddy THE Farmer myanmar Digital Life Myanmar Goal
blog ဆိုင်ရာ (1)
Boodloader unlock (1)
crack file သုံးနည်း (1)
CWM Recovery (2)
facebook ဆိုင်ရာ (4)
Internet ဆိုင်ရာ (7)
IOS application (11)
IPhone ဆိုင်ရာ (25)
Java ဆိုင်ရာ (1)
key ဆိုင်ရာ (1)
microsoft office ဆိုင်ရာများ (3)
musical softwares (3)
myanmar font (2)
online MRTV4 (1)
partten lock @ password (1)
patch file သုံးနည်း (1)
Proxy ဆိုင်ရာ (1)
SIM card ဆိုင်ရာ (2)
System Error (2)
USB ဆိုင်ရာ (7)
video edit softwares (5)
web-site လိပ်စာများ (1)
windows ဆိုင်ရာ (6)
windows တင်နည်း (1)
ကျန်းမာရေး (2)
စားမယ် သောက်မယ် (8)
ွGmail ဆိုင်ရာ (4)
Napyitaw, Napyitaw, Myanmar (Burma)
လင်းဝင်း(နည်းပညာ). Simple theme. Theme images by Jason Morrow. Powered by Blogger.